ဘယ်ယောက်ျားမှ စကားမပြောနဲ့နှင့် သဝန်ကြောင်တာ မြရင် အံ့တော့တယ် by htwegyi | Steem
ဘယ်ယောက်ျားမှ စကားမပြောနဲ့နှင့် သဝန်ကြောင်တာ မြရင် အံ့တော့တယ် by htwegyi
myanmar · @htwegyi · 2019-05-19T13:54:30+00:00 (edited)
ဘယ်ယောက်ျားမှ စကားမပြောနဲ့နှင့် သဝန်ကြောင်တာ မြရင် အံ့တော့တယ်
No man is talking.
ကျွန်တော် လေဘာတီမမြရင် အကြောင်းရေးဖို့
စာစီထားပြီးဖြစ်သော်လည်း မျက်လုံးကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ ယခုမှ ရေးဖြစ်သည်။ နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်အကြောင်းရေးပြီး လေဘာတီမမြရင် အကြောင်းဆက်ရေးသားရန် စိတ်ကူးထားသည်။ ရှေးအနုပညာရှင်များ၏ အနုပညာစွမ်းရည်များကို ကြားရ၊ သိရ ၊ ဖတ်ရ၊ မှတ်ရတော့ သူရို့အားပိုပြီး လေးစားအားကျမိရသည်။ လေဘာတီမမြရင်အား လေဘာတီဟု အမည်ကို
ကျွန်တော်သိရှိခဲ့သည်။ သူမကို သတိထားမိခဲ့သည်။
သူမသီဆိုခဲ့သော သီချင်းများက သူမကို မသိ၊
မမြင်ဘူးသော်လည်း သူမကို သတိထားမိစေသည်။
သူမရဲ့ ပုံရိပ်ကို စိတ်ကူးမှာ ပုံဖော်စေသည်။
သီဆိုထားကြသည်။ ရေးသူကလည်း ကောင်း၊
ဆိုသူကလည်း ကောင်း၊ တီးသူကလည်း ကောင်း၊
မည်သို့မေ့လို့ရပါ့။ အမေ လူထုဒေါ်အမာ၏
ပြည်သူချစ်သော အနုပညာသည်များ မှ
လေဘာတီမမြရင် ကို အသံမင်းသမီးဟုလည်း
ခေါ်ကြသည်။ သူမကို ၁၂၆၆ ခုနှစ်တွင် သာစည်နယ်
ရွှေဖလားကန်ရွာ၌ မွေးဖွားသည်။ သူမသည် ဆံပင်
သည်။ အသံကောင်းသည်။ သူမ၏အပြုံးသည်
နုပြီး ယဉ်သည်။ သူမ၌ ပီယရှိသည်။ မမြရင်တို့
ခေတ်က အသံချဲ့ စက်များ မပေါ်သေးပေ။
မိမိပင်ကိုယ်အသံနှင့် ပွဲခင်းကို မပေါက် ပေါက်အောင်
ဆိုရသည်။ မမြရင် ပွဲကရင်း ဆိုလိုက်၊ ဟစ်လိုက်
သည့်အခါ ပြိုင်ကနေသည့် အခြားပွဲခင်းက လူကို
သူမဆီရောက်အောင် ခေါ်သလို သူမအသံကပေါက်
”ခုကာလ မင်းသမီးတွေ အသံချဲ့စက် ရှိလို့သာ
ထမင်းစားရတာပေါ့၊ သူတို့ပင်ကိုအသံက ခြင်
မြည်သလောက်ရှိတာပဲ” ဟု လူပျက်ချန်ပီယံ
ဘလှိုင်ကြီးကပြောဆို ဝေဖန်ဘူးသည်။ မမြရင်
ပွဲကလျှင် ပရိတ်သတ်မှာ ၂၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ တောပွဲ
များ ကပါလျှင် လှည်းနောက်မြီးထိုးကြည့်သည့်
ကြားအောင် သီချင်းဆိုရသည်။ ကပြရသည်။
အသံချဲ့စက် မရှိသည်မို့ သနားစရာကောင်းလှ
လေဘာတီမမြရင် သည် သူမအသံကို အထူးဂရုစိုက် သည်။ ပွဲကသွားရာတွင် ကားလမ်းခရီးနည်းပြီး၊
လှည်းလမ်းခရီးကများသည်။ ဖုံလမ်းကို လှည်း
မောင်း၍ဖုံထလာသည့်နှင့် သူမပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းကို
ပုဝါကြီးနှင့် လုံလုံကြီးပိတ်ဆို့ထားသည်။ သူမဆံပင်များကိုလည်း ဖုံမဝင်အောင်ကာကွယ်သည်။
ပွဲကမည့်နေ့တွင် ညစာမစားဘဲ မန်ကျည်းမှည့်ဖျော်
အလှူ ၊ မင်္ဂလာပွဲပြုလုပ်သူများသည် ပုဏ္ဏားရွေး
ပေးသည့်ရက်ကို အလှူမဖြစ်ဘဲ စိန်ဗေဒါနှင့် မမြရင်
အားသည့်ရက်မှ အလှူ မင်္ဂလာရက် အတည်ဖြစ်
သည်။ လေဘာတီမမြရင် သည် အငြိမ့်မင်းသမီး
ဆိုပေမင့် မကလက်၊ ဣနြေ္ဒရသည်။ သူမ၏
အငြိမ့်ပွဲကို အဖေ၊ မောင်တို့နှင့် အတူကြည့်၍ရ
သည်။ ပရိတ်သတ်က သူမကို အရူးအမူးချစ်ကြိုက်
စွဲလန်းအောင်မလုပ်၊ သူမကို သနားပြီးချစ်အောင်
တစ်ခါက လေဘာတီမမြရင် တို့အငြိမ့် မလှိုင်နယ်သို့
သွားကသည်။ လမ်းခရီး၌ သူမတို့ စီးလာသည့်
မရောက်ပေ။ လေဘာတီမမြရင် အငြိမ့်ဆို၍
ဧရာမဝိုင်းကြီးနှင့် စောင့်နေကြသည်။ သို့သော်
အငြိမ့်က ည ၉နာရီမှ ၁၀နာရီထိအောင် ပေါ်မလာ
ပေ။ ထို့ကြောင့် ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်က တမျှော်မျှော်
ဖြစ်ရာမှ ဒေါပွလာကြသည်။ ပွဲစီစဉ်သူများမှာလည်း အရှက်ကွဲ၍ မျက်နှာမပြဝံ့ကြ။ ၁၀နာရီထိုးပြီးမှ
မမြရင်တို့ အငြိမ့်ကားက ပွဲခင်းသို့ရောက်လာသည်။
ကြောက်နေကြသည်။ ကားပေါ်မှ အငြိမ့်ပစ္စည်းများကို ကပျာကယာချတဲ့၍ ပွဲကရန် ခင်းကြ ကျင်းကြ
သည်။ ဤတွင် မမြရင်မျက်နှာလေးမြင်ယုံဖြင့်
စိတ်ကျေသွားသည့် ပရိတ်သတ်ကြီးက ချက်ချင်းမကနှင့် ထမင်းစားကြဦး၊ ထမင်းစားပြီးမှ ကကြဟု အတင်းစားခိုင်းပြီး စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဆက်စောင့်ကြည့်ကြသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်မှ အပြန်ငှက်ဖျားမိ၍ မကနိုင်သော
သူမကို သေပြီဟု သတင်းပျံ့သည်။ ကျန်းမာ၍
ပြန်ကသည့်အခါ နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင် က
တုံးကျော်မ သီချင်းရေးစပ်ပေးသည်။ သူမသည်
မန္တလေးတောင်တွင် စောင်းတန်း ၂ခန်းလှူခဲ့သည်။
မမြရင်သည် ထိုခေတ်က သူမအားသေလုအောင်
ကြိုက်မည့်သူများရှိသည်။ ထိုသူတို့က ဟေးလား
ဝါးလားကာလသားများမဟုတ် လျှမ်းလျှမ်းတောက်လူစားများကလည်းကြိုက်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်
မမြရင်၏ရည်စားက သူမကို သဝန်တို၍ ပွဲမကရန်
ပြောသည်။သို့သော် မမြရင်သည် ပွဲမကဘဲ မနေနိုင် ၍ ပွဲပြန်ကခဲ့သည်။ ပရိတ်သတ်ချစ်သနားခဲ့သော၊ အသံမင်းသမီး လေဘာတီမမြရင်သည် အသက် ၄၁နှစ်တွင် ငှက်ဖျားရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
👍 curie, esteemapp, minnowsupport, mariusfebruary, camelot, vact, kevinwong, wackou, good-karma, arcange, thettinaung, hendrikdegrote, ansoe, c-squared, htwegyi, tombstone, iptrucs, sawlwin, feedyourminnows, mamamyanmar, asterkame, thura, billionairehein, suhlaing, yuzana, sheinthu, uthantzin, lwanwai, myothuzar, macoolette, aggamun, aunggyi100, a0i, hotsteam, face2face, massivevibration, aaronleang, delabo, yaelg, diebaasman, rival, nweoomon, locikll, doifeellucky, hdu, choogirl, imisstheoldkanye, tensor, didic, drmake, reaverza, pinksteam, allcapsonezero, raphaelle, jiujitsu, nicephoto, revo, alexworld, sarez, schroders, combatsports, blewitt, smalltall, mindstabber, and 100 others
"ဘယ်ယောက်ျားမှ စကားမပြောနဲ့နှင့် သဝန်ကြောင်တာ မြရင် အံ့တော့တယ်"
wackou0B 40,317,299,367 0.72%
tombstone0B 25,466,072,477 0.1%
mindstabber0B 714,943,522 100%
lola-carola0B 173,642,672 1.2%
kevinwong0B 40,368,549,817 0.5%
anwenbaumeister0B 81,685,077 2.4%
good-karma0B 37,993,959,705 2.73%
arcange0B 35,019,098,045 3%
liberosist0B 633,842,697 2.4%
arconite0B 126,966,861 0.25%
raphaelle0B 1,101,463,471 3%
mysteem0B 61,030,503 2.73%
psygambler0B 113,460,264 1.2%
demo0B 83,799,741 2.73%
lk6660B 427,489,422 1.2%
feruz0B 256,948,445 2.73%
whoib0B 487,499,861 70%
curie0B 751,347,309,482 2.4%
hendrikdegrote0B 31,313,106,209 2.4%
vact0B 45,634,841,167 2.4%
dashfit0B 212,100,450 1.2%
esteemapp0B 586,210,528,396 2.73%
gmedley0B 131,473,911 1.2%
camelot0B 60,088,820,130 100%
diebaasman0B 2,414,132,463 12%
moksamol0B 119,822,149 1.2%
choogirl0B 1,744,336,136 4.1%
iansart0B 499,090,469 1.2%
jiujitsu0B 1,024,632,714 1.2%
lekang0B 305,513,128 1.2%
minnowsupport0B 124,500,845,489 3%
zerotoone0B 198,002,721 1.2%
locikll0B 1,915,582,753 4.8%
aboutyourbiz0B 426,586,649 2.4%
jayna0B 250,977,981 0.36%
cryptokrieg0B 405,738,908 2.4%
rival0B 2,181,122,615 2%
tensor0B 1,607,186,918 1.2%
digitalis0B 179,803,901 1.23%
flatman0B 99,017,323 2.4%
allcapsonezero0B 1,122,654,301 1.2%
face2face0B 3,268,322,117 9%
bluemoon0B 630,266,056 2.4%
sheinthu0B 11,192,803,566 100%
hotsteam0B 3,466,020,168 10%
neumannsalva0B 347,886,530 1.2%
ansoe0B 29,946,701,828 75%
mamamyanmar0B 17,574,293,248 100%
asterkame0B 17,529,905,946 100%
myothuzar0B 7,166,582,711 100%
aaronleang0B 2,768,692,995 3%
cepul0B 90,683,652 4.1%
revo0B 958,952,761 1.2%
massivevibration0B 2,929,646,352 5%
eurodale0B 76,814,460 1.2%
reaverza0B 1,259,168,330 15%
torico0B 707,612,533 2.05%
joshman0B 433,291,408 0.12%
htwegyi0B 28,695,866,926 100%
dokter-purnama0B 124,830,379 1.2%
cryptononymous0B 237,323,502 1.2%
jlsplatts0B 148,154,607 0.48%
feedyourminnows0B 18,910,901,726 15%
esteem.app0B 588,471,239 2.73%
doifeellucky0B 1,876,456,010 1.2%
peaceandwar0B 320,496,555 1.2%
lwanwai0B 7,413,849,983 80%
joendegz0B 118,275,099 1.2%
florian-glechner0B 71,976,828 0.24%
thura0B 16,383,027,245 100%
imisstheoldkanye0B 1,714,006,986 1%
shayekh20B 94,778,033 50%
steemph.manila0B 471,410,274 4.1%
pinksteam0B 1,139,001,164 10%
nicole-st0B 118,367,088 1.2%
teukurival0B 85,114,603 1.2%
drmake0B 1,272,131,477 1.2%
thettinaung0B 32,031,017,001 100%
skycae0B 272,093,082 2.4%
xanderslee0B 90,631,999 2.4%
kenadis0B 256,211,651 1.2%
maticpecovnik0B 307,000,726 0.96%
iptrucs0B 22,808,416,828 25%
thescubageek0B 115,075,804 1.2%
danaedwards0B 220,548,365 2.4%
stahlberg0B 500,932,529 1.2%
gabrielatravels0B 110,291,498 0.6%
reizak0B 164,334,024 0.96%
zlatkamrs0B 99,807,119 2.28%
yuzana0B 12,316,933,577 100%
uthantzin0B 7,872,728,281 100%
mattiarinaldoni0B 88,357,686 4.1%
suhlaing0B 13,816,871,185 100%
sawlwin0B 21,471,515,166 100%
shinedojo0B 237,823,510 2.4%
bennettitalia0B 144,955,784 0.6%
billionairehein0B 14,218,674,599 50%
mininthecity0B 76,790,080 1.92%
trixie0B 75,466,730 10%
aggamun0B 5,254,726,562 50%
didic0B 1,418,909,101 1.2%
operahoser0B 143,099,199 0.36%
aunggyi1000B 4,318,599,865 100%
oghie0B 537,877,888 50%
vegan.niinja0B 111,130,276 1.2%
jbrrd0B 135,284,448 20%
ivan-g0B 281,188,850 1.2%
cryptofuwealth0B 88,559,924 11%
ambitiouslife0B 106,986,028 1.2%
positiveninja0B 235,672,922 1.2%
a0i0B 3,983,898,646 2.4%
gabyoraa0B 173,996,304 4.1%
misia19790B 190,866,199 1.2%
mariusfebruary0B 62,333,319,338 0.48%
goodway0B 161,265,162 1%
alexworld0B 952,304,977 50%
gracelbm0B 89,342,496 1.2%
avizor0B 88,240,181 1.2%
niouton0B 74,062,868 0.48%
schroders0B 894,063,948 0.72%
douglas10B 399,597,738 100%
nweoomon0B 2,113,113,576 100%
sarez0B 928,839,326 5.74%
urme330B 492,509,550 1%
longer0B 190,224,119 50%
blewitt0B 817,916,387 0.16%
kafupraise0B 98,052,399 50%
ilovecryptopl0B 295,223,280 1.92%
yomismosoy0B 289,302,468 50%
hansmast0B 137,089,371 1.2%
wstanley2260B 72,632,110 50%
yaelg0B 2,451,565,051 5%
clement.poiret0B 94,805,541 2.4%
c-squared0B 29,296,070,507 8.21%
annaabi0B 125,178,469 1.2%
trang0B 189,059,444 1.2%
laissez-faire0B 113,745,397 100%
chickenmeat0B 111,972,744 1.2%
macoolette0B 6,738,533,010 1.2%
javier.dejuan0B 486,733,818 2.4%
reverseacid0B 186,486,291 1.2%
eu-id0B 622,620,766 10%
ambercookie0B 77,475,705 90%
alvin06170B 137,222,308 1.2%
solarphasing0B 365,191,801 5%
hdu0B 1,844,269,852 2%
double-negative0B 519,008,073 20%
delabo0B 2,740,799,799 1%
ascorphat0B 150,896,271 2.5%
goodcontentbot0B 70,545,558 50%
hanyseek0B 56,587,075 50%
herculean0B 67,743,013 50%
combatsports0B 849,395,969 2.4%
breakout1010B 441,192,706 1.2%
cleiver0B 52,537,593 50%
chrisluke0B 117,901,846 26%
nicephoto0B 1,013,228,786 1.92%
sumotori0B 317,887,146 75%
smalltall0B 759,390,491 20%
theinspiration0B 80,273,232 100%
epic4chris0B 77,430,306 100%
cjmoney0B 51,987,930 50%
t7500B 50,826,483 50%
cojp0B 67,748,210 50%
@esteemapp · 2019-05-19T01:24:54+00:00
@htwegyi · 2019-05-19T01:28:15+00:00
@minnowsupport · 2019-05-19T01:29:06+00:00
<p>Congratulations!  This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by htwegyi from the Minnow Support Project. It'sawitness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows.  Please find us at the <a href="https://discord.gg/HYj4yvw"> Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel</a>.  It'sacompletely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.</p> <p>If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=minnowsupport&amp;vesting_shares=102530.639667%20VESTS">50SP</a>, <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=minnowsupport&amp;vesting_shares=205303.639667%20VESTS">100SP</a>, <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=minnowsupport&amp;vesting_shares=514303.639667%20VESTS">250SP</a>, <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=minnowsupport&amp;vesting_shares=1025303.639667%20VESTS">500SP</a>, <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=minnowsupport&amp;vesting_shares=2053030.639667%20VESTS">1000SP</a>, <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=minnowsupport&amp;vesting_shares=10253030.639667%20VESTS">5000SP</a>. <br><strong>Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.</strong></p>
@htwegyi · 2019-05-19T01:31:24+00:00
@mamamyanmar · 2019-05-19T06:15:54+00:00
ညည်းစာဖတ်ရတာ မမြရင် ကို ကြိတ်ကြွေနေခဲ့ တဲ့ အတိုင်းဘဲ အေ
@htwegyi · 2019-05-19T10:36:48+00:00
မမြရင်ကို မမြင်ရပေမင့်ကြွေလို့ ရပါတယ်အေ
@aggamun · 2019-05-19T10:57:24+00:00
စိတ်ဝင်စား စရာလည်း  ကောင်း၊ ဗဟုသုတလည်း ရ ပါပေ့ ဗျာ။ စာရေး တာ တော်တော် ကောင်းတယ်နော် ဦးထွေးက။ တစ်ခါတလေ အကြောင်းအရာ မကောင်းတာတောင် ရေးသားပုံက စွဲဆောင်မှု အတော်ရှိတယ်။ အပြင်မှာ စာရေးဆရာလား။
@htwegyi · 2019-05-19T12:54:15+00:00
ဟာ စာရေးဆရာတော့ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
ခုစာတွေက အမေလူထုဒေါ်အမာရဲ့ အိုင်ဒီယာတွေပါ
@yuzana · 2019-05-19T14:08:54+00:00
@htwegyi · 2019-05-20T01:26:45+00:00
ဟုတ်တယ်ဗျ သီချင်းတွေကဆိုရတာကို အရသာရှိချက်
@suhlaing · 2019-05-19T14:25:36+00:00
လေဘာတီ မမြရင် အကြောင်းလေးဖတ်ရတော့ ဟိုဟာသလေးသွားသတိရမိတယ် လေဘာတီခေါ်မပု လေဘာတီခေါ်မပု ကျမ မပု
@htwegyi · 2019-05-20T01:27:45+00:00
လေဘာတီမစု ခေါ် ကျမ မစု တော့ လုပ်လိုက်လိုက်ပါ😁
@thettinaung · 2019-05-19T17:11:42+00:00
ဒီစာဖတ်လိုက်ရုံနဲ့ Broက မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ဝါသနာပါမှန်း သိရတယ်ဗျ။လေးစားပါတယ်ဗျာ
Posted using [Partiko Android](https://partiko.app/referral/thettinaung)
@htwegyi · 2019-05-20T01:29:27+00:00
မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုကိုတော့ လူတိုင်းမေ့ထားလို့မရဘူးဗျ
@ansoe · 2019-05-20T02:25:18+00:00
အော် မြရင် မြရင် မြရင် ☺
@htwegyi · 2019-05-20T06:11:51+00:00
ချစ်ကြပေသရှင် ပြည်တစ်ခွင် 😁
@c-squared · 2019-05-20T23:57:00+00:00
cron0B 411,554,814 0.02%